Ataovy fampisehoana faharoa ho an'ny Mac amin'ny alàlan'ny Duet Display | Vaovao IPhone
Apple dia orinasa lehibe manokan-tena amin'ny famolavolana sy fananganana fitaovana isan-karazany, manomboka amin'ny solosaina, smartphone, tablette, mpilalao mozika, sns ... fitaovana misy fiasa samy hafa nefa afaka miara-miasa koa.
Androany izahay mitondra fampiharana anao izay ahafahanao mampiasa ny iPad amin'ny fomba hafa, hampiasana azy ireo miaraka amin'ny Mac's. Ary misy fotoana maro izay ahitantsika fa mila toerana bebe kokoa amin'ny efijery misy antsika, mety tsy hanana ny fahafaha-manara-maso fanampiny (na Sinema Display) fa mety miaraka amintsika ihany koa ny iPad. Duet Display dia hamela anao hampiasa ny iPad ho efijery faharoa amin'ny Mac's.
Eny marina fa efa nisy fampiharana hafa nitovy, iDisplay Izy io angamba no fanta-daza indrindra saingy marina ihany koa fa ny fiasan'izy io dia namela be ny faniriana, nanana lagy manan-danja (mampiseho fahatarana) fa raha tokony hanamora ny fiasanay amin'ny Mac, dia nanasarotra ny fiainantsika loatra izany. Fifandraisana Mac-iPad izay tamin'ny fampiharana taloha dia novokarina tamin'ny tambajotra Wifi fa amin'ny Duet Display dia tratra amin'ny alàlan'ny tariby USB.
Izany indrindra no Fifandraisana tariby USB izay mahatonga antsika hanana lagindry ambany kokoa noho ilay azontsika atao amin'ny fifandraisana Wi-Fi eo anelanelan'ny efijery Mac sy ny iPad. Tsy hanana efijery fanampiny fotsiny isika, fa afaka mifandray amin'ny Mac amin'ny alàlan'ny efijery mikasika ny iPad ihany koa. Duet Display dia miasa miaraka amin'ireo iPad na iPhone navoaka rehetra hatramin'izao raha mbola mampiasa iOS mitovy na lehibe kokoa noho ny iOS 5.1.1 izy ireo.
Azonao atao ny mahazo ny Duet Display ho an'ny 8,99 euro ao amin'ny App Store, vidiny iray izay raha ny filazan'ny mpamolavola dia fampiroboroboana amin'ny 50%, ka raha te hanandrana ny fampiharana ianao dia fotoana mety ahazoana azy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » Ataovy fampisehoana faharoa ho an'ny Mac miaraka amin'ny Duet Display ny iPad-nao
Izaho dia mpampiasa Mac hatramin'ny 1987, manana solosaina fito aho, ao anatin'izany ny tsingerintaona Apple20TH, tia iPhone sy iPad ary mbola tsy nahita "chestnut" toa an'ity avy amin'ny DUET ity aho. Manoro anao aho hanoratra ny tenanao alohan'ny hanoloranao azy amin'ny effusion izay nataonao. Iray amin'ireo "lavo" ...
Valiny tamin'i Jose Maria
Jose Maria, azonao atao ve ny manamarina bebe kokoa ny didim-pitsaranao momba ny DUET ???
Tsy famerenana izany, tsy manome naoty naoty ilay rindranasa akory izahay, fa ny vaovao dia miresaka momba an'ity rindranasa vaovao ity fotsiny no amoahanay, ary tsy mamporisika ny hametrahana azy izahay, na milaza fa manaraka izay fampanantena. Raha manana traikefa amin'ity rindranasa ity ianao ary ratsy izany, azonao atao ve ny manazava bebe kokoa amin'ny lalina hoe inona ireo lafiny ratsy ary ireo mpamaky hafa ary izahay tenany dia afaka manana hevitra tsara kokoa momba izay tena atolotray.
Juan & Maria dia hoy izy:
Tsy mifanaraka amin'ny ios 5.1.1
Valiny tamin'i Juan Maria